Naya Post Nepal | काठमाडौं मै यस्तो ! सामान किन्न गएकी महिलालाई पसलभित्रै क’र’णी, साहुजी ‘प’क्रा’उ
काठमाडौं मै यस्तो ! सामान किन्न गएकी महिलालाई पसलभित्रै क’र’णी, साहुजी ‘प’क्रा’उ
ललितपुर । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका ९, लुभुको चेतना चो’कस्थित होलसेल पसल सञ्चालकलाई एउटी महिलालाई क’र’णी गरेको आ’रो’प’मा प्रहरीले स’मा’तेको छ । ३७ वर्षीय रमेश थापा मगरले ३२ वर्षीया महिलालाई कर”णी गरेको अ’भि’यो’ग लागेको हो ।
मगरले’ ती महिलालाई सामान किन्न आएको बेला पसलभित्र लगेर ज’ब’र’ज’स्ती करणी गरेको बताइन्छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग लुभु’बाट खटि’एको प्रहरी टोलीले उनलाई प”क्रा’उ गरेर आवश्यक अ’नु’स’न्धा’न गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले निकट प्रेस चौतारी नेपाल उदयपुरको नेतृत्वमा जीवनाथ दाहाल छानीएका छन् । चौतारी उदयपुरको छैठौ जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा दाहालका लागि सहमति जुटेको हो ।
१७ सदस्यीय नयाँ समितिमा उपाध्यक्षमा पुरुषोतम सापकोटा, समाबेसी उपाध्यक्षमा रन्जु दनुवार र सचिवमा राकेश नेपाली छानिएका छन् । त्यस्तै सहसचिवको रुपमा हिराजंग राईको नाम सर्वसम्मत जुटेको छ ।
समाबेसी सहसचिव भने रमिला दनुवार, कोषाध्यक्षमा करुणा कार्कीको नाम चयन भएको छ । अन्य सदस्यहरुमा जयराम पुर्वछाने, उर्मीला दनुवार, रेनुका चौधरी, गीता पोखरेल, राजु मगर, सिमसन राई, सुबास ज्युठकुरी, दुर्गा एसके, रितिक सेन्चुरीको नाम समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
पार्टी जिल्ला इन्र्चाज मन्जुकुमारी चौधरी र नवचयन अध्यक्ष परमेश्वर घिमिरे सहितको उपस्थितीमा आयोजित अधिवेशनबाट छानिएका अध्यक्ष दाहालले श्रमजिवी पत्रकारहरुको हितमा संस्थागत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
२०७८ माघ १, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 104 Views